Kuonekana nechena kumberi, yese iPhone ichave nematema mafuremu | IPhone nhau
Kuonekana nechena kumberi, maPhones ese anenge aine mafuremu matema
Kuverengerwa kweiyo iPhone X kwatanga uye data uye fungidziro nezvazvo zvinoramba zvichidonha, zvekuti hapana kana chinhu chinosara cheKeynote munaGunyana 12 na19: 00 dzemasikati. Muchidimbu, nhasi tinokuunzira ruzivo rwunokonzeresa mufaro nekuodzwa mwoyo zvakaenzana, zviri pachena kuti ese maPhones matsva achave aine nhema nhema.
Kune vatengi vazhinji vatoshandiswa kuchena michetoNekudaro, iyo hombe dhizaini dhizaini iyo Apple yakaronga kune yayo nyowani chishandiso inogona kukonzeresa kuvhiringidzika kwekushandisa akasiyana mavara ane mavara.
Chii chichava mhedzisiro chaiyo? Tichiri kuchiona, asi chokwadi ndechekuti kuve neiyo FullVision skrini ine mamirimita emafuremu, chinhu chinonzwisisika zvakanyanya kunge chiri chekushandisa nemazvo rima dema, kupa kunzwa kwesikirini izere kana chishandiso chakazorora. Sekureva kwa Ming-Chi Kuo, mutsva-mutsva-mu-muongorori anoshandira KGI Securities, Iye anofunga kuti ese ari maviri machena, goridhe uye sirivheri modhi ichave ine nhema nhema kumberi zvisinei nemhando yatakasarudza. Izvi zvinogona kunge zvichikonzerwa nepedyo uye nemagetsi ekuona masisitimu ayo anogona kunge ari pasi pechidzitiro, pamwe nema sensors ekumusoro, ayo akakurisa zvakanyanya, uye angave asina kunyatsoenderana nechemberi chena.
Izvo zvese zvinokonzerwa neakateedzana e laser sensors uye zvigadzirwa, zvirinani nekuda kwekudonha, izvo zvina zvinoumba chikamu chepamusoro cheiyo iPhone uye zvinoda chimiro chechitema kutenderedza kana kushanda nemazvo. Kunyangwe zvinosuruvarisa mhedzisiro iyo "goridhe" iPhone ine dema kumberi inogona kupa inogona kunge yakati siyanei, saka chimwe chinhu chinotitaurira kuti zvirokwazvo iyo X X ichatengeswa zvakanyanya mune yakajairwa nhema pane mune mamwe ese mavara ayo iyo kambani Cupertino inowanzo kupa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone X » Kuonekana nechena kumberi, maPhones ese anenge aine mafuremu matema
Inguvai Apple Keynote? Zvirongwa zvese zvepasirese